ဥရောပခividဉ်းမမြArာိးိုံင်ငံမocrားကိုအုပ်ခ:ပ်ြမြ။ ္ဘငိမ်းခInမ်းရေးအဖြဲutionအစည်း - ူမန်မိာိုံင်ငံမ:ာိးံငြ့် Online Business, Wholesale & B2B Marketplace သတင်း
ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
Durig ၏နောက်ဆုံး ၀ င်ငွေအဖြေဖြစ်သောဥရောပအထက်တန်းလွှာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ဥရောပအပြာရောင်ချစ်ပ်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များကို ဦး တည်သည်။
၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားမှုအလားအလာကိုပင်ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဥရောပမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များသည် Durig ၏ရှယ်ယာအခြေခံသော ၀ င်ငွေအပေါ် မူတည်၍ တူညီသောနည်းစနစ်များစွာကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်။ အနများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမြတ်များများတိုးပွားလာသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည့်နာမည်ကြီးအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။အဆိုပါအစုစုတွင်ကျင်းပသူများကဲ့သို့) ။ ဤကုမ္ပဏီများသည်ခိုင်မာသည့်တိုးတက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေခိုင်မာသောမှတ်တမ်းများရှိသည့်အလွန်ကြီးမားပြီးခိုင်မာသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရဈေးကွက်ကျဆင်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ခြင်းကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ Durig သည်ဤစိတ်ကူးကိုဥရောပရှယ်ယာစျေးကွက်များသို့ချဲ့ထွင်ခဲ့သည် ဥရောပ Aristocrats အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ င်ငွေနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သောအစုစုတစ်ခုတွင်အတူတကွပါ ၀ င်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဆောင်ကြဉ်းပေးရန်။
အဆိုပါ ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျောအပြာရောင် chip ကိုစတော့ရှယ်ယာ (သူတို့ရဲ့မြတ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြတ်အစွန်းဝင်ငွေ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ရန်နှစ်စဉ်ပေးဆောင်အမြတ်တိုးမြှင့်၏နိမ့်ဆုံး 25 နှစ်သမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဥရောပဖလှယ်မှုအပေါ်စာရင်းဝင်။
An Barrons ထံမှဆောင်းပါး Durid ရဲ့တွင်ပါရှိသောများကဲ့သို့နိုင်ငံခြားခွဲဝေရှယ်ယာအမည်ရှိသိရသည် ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု "2020 အတွက်အကောင်းဆုံးဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု" ။
“ အမေရိကန်အစုရှယ်ယာများထက်အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိမှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားရှယ်ယာများသည် ၀ င်ငွေကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထွက်နှုန်းလုံလောက်စွာရရှိခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာများ၏တိုးတက်မှုနှင့်စတော့ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုများအပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲခွဲဝေခွဲဝေမှုအပေါ်ပြည်ပမှအလေးထားမှုတို့ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဒေါ်လာဈေးကျသွားရင်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကနောက်ဆုံးပေါ် S&P 500 အညွှန်းကိန်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ sector ကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ”
ဝင်ငွေ။ လူတိုင်းကလိုအပ်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကပိုချင်တယ်။ ဥရောပမင်းသမီးများနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မားသောဝင်ငွေကိုရှာပါ။
တစ်ဦးနှင့်အတူ ပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်း 3% ကျော်အထွက်နှုန်း, ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များသည် ၀ င်ငွေအမြောက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှာဖွေနေသည့် ၀ င်ငွေအဖြေဖြစ်ရန်မျှော်လင့်နေကြပြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်နိုင်ငံများစွာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်တိုးချဲ့ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရရှိထားသည်။ ထို့အပြင်ပုံမှန်ခွဲဝေပေးငွေများသည်ကြားဖြတ်စတော့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်
သမိုင်းကြောင်းအရအပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာအများစုသည်သူတို့၏ရှယ်ယာရှင်များအားပေးသည် Dividends နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအစုရှယ်ယာရှင်များကိုဆုချဖို့နှင့်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ခွဲဝေတိုးမြှင့်လေ့ရှိပါတယ်။ အမြတ်ဝေစုပေးငွေများတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုလျှော့ချနိုင်သည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသမိုင်းကြောင်းအရခွဲဝေမှုသည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ သောကြောင့် ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု Durid Capital သည်သမိုင်းကြောင်းအရခွဲဝေမှုများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအလေးထားသည်။ တည်ထောင်ထားမှု၏ကြီးထွားလာနေသောအမြတ်များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည် အပြာရောင်ချစ်ပ် နှိုင်းယှဉ်တသမတ်တည်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်းကို ဦး တည်သွားစေခြင်းနှင့်ကြီးထွားမှုပိုဆိုး, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမြတ်အစွန်းပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်ပိုမိုသိသာဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။
စိတ်၏အပြာရောင် Chip ငြိမ်းချမ်းရေး
ဒီမဟာဗျူဟာမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကို“ အပြာရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” လို့မှတ်ယူကြပါတယ်။
များစွာသောသူတို့သည်အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုရရှိလေ့ရှိသည်ဟူသောအတွေးနှင့်ရင်းနှီးကြသည်။ စျေးကွက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုကာလများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယင်းတို့ကိုအတန်ငယ်အနေနှင့်ထားရှိကြသည် ဘေးကင်းလုံခြုံဆိပ် သူတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တသမတ်တည်းမြတ်များငွေပေးချေမှုသည်။
Thornburg ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှ Money Manager Ben Kirby ကသူသည်စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကျဆင်းမှုများကိုမည်သို့မည်ပုံရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်းရှင်းပြသည် CNBC နှင့်အင်တာဗျူးတွင်:
အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ခိုင်မာသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်ကျန်းမာသောတိုးတက်မှုအဆင့်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသည့်အချိန်များတွင်ပုံမှန်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ In စျေးကွက်ကိုထမ်းရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏အပြာရောင်ချစ်ပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူရန်လေ့ရှိသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရသူတို့၏ပြန်လည်နိုင်စွမ်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
Blue-chips များသည်ခိုင်ခံ့သောခိုင်မာသည့်အခြေခံများရှိသည် ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်များ, ငွေသားစီးဆင်းမှု, သက်သေပြနှင့်အရွယ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတသမတ်တည်းတိုးတက်မှုနှုန်း။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအမြောက်အများသည်အပြာရောင်ချစ်ပ်များကိုအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားများထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။နှင့်ကြီးထွားလာစတော့စျေးနှုန်းတိုတောင်းသောကာလတိုကျဆင်းမှုကြောင့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်ခွဲဝေများကကူညီသည်။
ထို့အပြင်အဆိုပါ တန်းတူအလေးချိန် အသုံးပြုသည်ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိတွေ့မှုသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ရာထူးတစ်ခုမှခဏတာထိ မိ၍ လဲနိုင်ပါကဤနည်းအားဖြင့်အစုရှယ်ယာအတွင်းရှိအပြာရောင် - ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာရာထူးအမျိုးမျိုးသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ခိုင်မာတဲ့ Dividends, အားကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီများ
ProShares မှဒါရိုက်တာ Kieran Kirwan ကမတည်ငြိမ်မှုနှင့်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များမဟာဗျူဟာများကြည့်ရှုကြ၏ လေးနက်သောရွေ့လျားမှုချောမွေ့အတွက်တွင်လည်းကူညီရန်တစ်လမ်းအဖြစ်:
သူတို့ရဲ့ပိုမိုပေးဆောင်သောကုမ္ပဏီများ ထိန်းသိမ်းထားသောဝင်ငွေများ အစုရှယ်ယာရှင်များမှခွဲဝေမှတဆင့်တိုးမြှင့်ခံရဖို့ထင်နေကြသည် အစုရှယ်ယာရှင်တန်ဖိုး။ ၄ င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဆုရရှိသည်ဟုခံစားရသောအစုရှယ်ယာရှင်များသည်ကုမ္ပဏီတွင်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှိပြီး၊နှင့်ဆွဲဆောင်မှု) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူ့ဟာသူ၏။ တသမတ်တည်းခွဲဝေများ၏အဓိကဖြစ်ကြသည် ဥရောပ Aristocrats ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Aristocrat ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမြတ်တွေကနှစ်စဉ်တိုးလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရလို့ပါ။ ဒီတိုးပွားလာတဲ့မြတ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြောင့် dividend ၀ င်ငွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားလာသင့်ပါတယ်။
European Dividend Aristocrats နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများရရှိရန်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
Dividend Aristocrats များသည်နာမည်ကြီးအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။အတွက်ကျင်းပသူများကဲ့သို့ ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစုခိုင်မာသည့်တိုးတက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းကြောင်းအရသမိုင်းတွင်စျေးကွက်ကျဆင်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
Durig ရဲ့ ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု သူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့အမြတ်အစွန်းများအတွက်ဤကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများ၏စတော့ရှယ်ယာအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်း, တသမတ်တည်းမြတ်များဝင်ငွေထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ် ပင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့အလားအလာပုံမှန်ခွဲဝေပေးငွေများသည်ကြားဖြတ်စတော့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှု၏သက်ရောက်မှုကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။ အစုစုသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ခြုံငုံအမျိုးမျိုးတိုးတက်အောင် အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကိုဖြန့်ကျက်ခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုခွင့်ပြုသည် မိမိတို့နေအိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေသည်.
၀ င်ငွေနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရလိုသူများအတွက်ယနေ့မသေချာမရေရာသောလောကတွင် Durig's ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု အားလုံးသည်အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား (971) 732-5121 သို့ခေါ် ဆို၍ info@durig.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစုကျေးဇူးပြု၍ Durig ကိုခေါ်ပါ (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
Durig Capital သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အထူးပွင့်လင်းမြင်သာသောဘဏ္fidာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအကောင့်အများစုသည် SPIC အာမခံထားသည့်အထူးလျှော့စျေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် TD Ameritrade Institutional တွင် (သို့) Interactive ပွဲစားများတွင် ၄ င်းတို့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အလွန်အောင်မြင်သော FX2 ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြားမှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား TD Ameritrade ရှိအကောင့်များမှတဆင့်စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
2020 ADR အမေရိကန်အပ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အပြာရောင် Chip ခွဲဝေမှု အပြာရောင်ချစ်ပ် ငွေချေးစာချုပ်များ အများပိုင်သတင်း မြတ်နိုးသူအရစ္စတိုတယ် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် မြတ်များထိတ် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း Dividends ခွေး ဥရောပ၏ခွေးများ အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P ၏ခွေးများ Dogs ကိုအစုစု ရေ Durig Capital ကို ရှယ်ယာ အီးယူအာရ် ဥရောပ ဥရောပအထက်တန်းလွှာအစုစု ဥရောပခွဲဝေမှု ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဥရောပစတော့ရှယ်ယာ ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားစတော့ရှယ်ယာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြင့်မြတ်သော မြင့်မားသည် မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျော ဝငျငှေ ဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် စျေးကွက်များ အခွင့်အရေး အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး စတော့ရှယ်ယာ ယူအက်စ် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
သက်ရှိပစ္စည်းများဖြင့် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း - ၎င်းကိုကာကွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။